Top Iri DVD Creator N'ihi Windows 10
The Top Iri DVD Creator N'ihi Windows 10
Windows 10 bụ Kacha ọhụrụ sistemụ na ngọngọ, na Ọ na-ama converting a otutu ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji Windows 10, ị ga-chọrọ ịmata banyere mmemme ị nwere ike iji ya.
Otu n'ime ebe ndị ị na Aga chọrọ tụlee na-achọ na omume bụ freeware; omume na ngwa ọdịnala pụrụ ịghọ oké ọnụ mara mma ngwa ngwa mgbe i nwere ọhụrụ kọmputa, otú freeware - ma ọ bụ software na i nwere ike ibudata na-eji enweghị akwụ ụgwọ - bụ nnukwu ego.
DVD Onye Okike maka Windows 10 bụkwa bara uru - ọ dị mfe ida data, na-enwe a ndabere bụ mgbe a ezigbo echiche. DVD Onye Okike software nwere ike ịpụta na ị nwere ike ndabere gị data, ma ọ bụ mepụta n'ụlọ fim inye enyi na ndị ikwu, ma ọ bụ nanị ike a nchekwa diski maka gị niile dị mkpa na-echeta.
DVD dị ukwuu maka nchekwa na nzube. Ha jide a otutu data, ha na-dịtụ mmebi-àmà na ha na-elu ọzọ ọ bụla ohere ụlọ ahịa. A ezi free DVD Onye Okike maka Windows 10program ga enyere gị aka ike backups, fim na media nchekwa ngwọta na-enweghị okodu ego ma ọ bụ na-enwe na ịmụta ihe ọ bụla mgbagwoju anya.
Nkebi nke 1:-atụ aro DVD Creator maka Windows 10
Part 2: The top 10 DVD Creator maka Windows 10
Nkebi nke 1:-atụ aro DVD Onye Okike maka Windows 10
Na-atụ aro: Wondershare DVD Creator (n'ihi na Windows & Mac)
Wondershare DVD Creator Bụ ihe dị mfe na-eji DVD Onye Okike software nke na-enyere gị ike a professinal achọ DVD n'ime nzọụkwụ. Na ukwuu wuru na-ndebiri maka gị DVD NchNhr, i nwere ike ike a pụtara DVD karịa mgbe. Ọ na-akwado Windows 10 na ndị ọzọ na mbụ Windows nsụgharị.
Na-akwado ihe ọ na-ewu ewu ọsọ ọsọ video formats.
Mepụta a ọkachamara DVD na 40 + professionally e menu ndebiri.
Hazie videos na menu ndebiri tupu na-ere ọkụ Disc.
Ịkekọrịta kere DVD na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ.
Akwado os: Windows 10/8/7 / XP / Vista / 2003 / Windows 10, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
Part 2: The Top 10 DVD Ime Software
1. Ainishare DVD Onye kere
Nke a software emepụta nnọọ elu mma videos si ma ọkọlọtọ definition ma ọ bụ elu definition faịlụ. Ke adianade do, e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche ihe i nwere ike na-eme na wuru na-nchịkọta akụkọ; akuku, gbatịa bee ma na-ekpeghachi / akaghị gị faịlụ. Nke a na-enyo gị site na otu-mado video Onye Okike n'ime na-ese. Mmetụta ndị a-akpọ ndị na inwe ike tinye watermarks na ndepụta okwu na-eme ka a a oké oke dị ka a DVD Onye Okike maka Windows 10.
Mụta ihe banyere Roxio MyDVD >>
2. Iji hụ software
Nke a na-enye ohere ka ị were faịlụ si dị iche iche formats, nakwa dị ka atụgharị ha dị iche iche dị DVD formats. Ọ bụ ihe nile na otu software na a keukwu ma n'ụzọ kwụ ọtọ ịghọta ọrụ interface.
Jụụ atụmatụ a software na-inwe ike ịdọrọ na dobe guzozie si Internet Explorer, ịgbanwe oke ihe dị iche iche dị iche iche na isi mmalite - gụnyere ọdịyo na HTMI ndapụta. Ọ na-abịa na ndụ free upgrades na ahịa nkwado, nke bụ a nkwa na ọdịnihu, na oké mkpa na a
Mụta ihe banyere Aone software >>
3. DVDFab DVD Creator
Ọ bụrụ na ị chọrọ ike n'ụlọ fim ka ma onye collections ma ọ bụ n'ihi enye efep dị ka onyinye ka hụrụ n'anya, mgbe ahụ, DVDFab nwere ike ịbụ software maka gị. Ọ na-emepụta nnọọ, nnọọ elu àgwà vidiyo na ọtụtụ dị iche iche formats, nke pụtara na ị ga-enwe ike inye pụọ a DVD na-enweghị troubleshoot onye ị-enye ya. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa eme ihe, nke dị ukwuu. Ọzọ oké mma bụ na ọ enye gị ohere ike karịa otu DVD na oge. Nke a bụ ego maka ndị na-mkpa DVD na-kere ngwa ngwa.
Mụta ihe banyere DVDFab DVD Creator >>
DVDFlick bụ mma kensinammuo, mara mma dị ike, na ihe nile gburugburu oké usoro ihe omume na-atụgharị n'ụlọ gị gị na video faịlụ n'ime n'ụlọ DVD. DVDFlick nwere ike ị na-azọpụta gị faịlụ na ọ ga-ewe a Ukwu ngụkọta nke 45 formats, tọghata ha na ha na-ogugu na DVD. Ọ nwere ihe dị mfe interface nke ga-ekwe ka ị na ike gị DVD si, na ọ bụ free iji, enweghị ihe jikọrọ.
Mụta ihe banyere DVDFlick >>
5. Windows Media Player
Windows Media Player eleghị anya ekwesịghị-atụle ka a DVD Okike. Ọ bụ a music ọkpụkpọ. Otú ọ dị, dị ka Windows Iri adịghị agụnye DVDMaker, ọrụ nke onye na-wuru DVD Onye Okike dara windows Media ọkpụkpọ. Windows Media ọkpụkpọ ga-maara na ọtụtụ n'ime unu - ọ meela on Windows usoro kemgbe mmalite. N'ezie, ugbu a, ọ nwere otutu ihe atụmatụ. Nanị gaa "Ọkụ" nhọrọ ke mgbasa ozi ọkpụkpọ ka malitere.
Mụta ihe banyere Windows Media Player >>
6. Free-ere Ọkụ Studio
Free-ere Ọkụ Studio bụ oké obere usoro ihe omume ma akwado gị data, ma ọ bụ na-eke a n'ụlọ n'ọbá akwụkwọ collection si gị videos. Ọ nwere ihe dị mfe na-eji ịke na interface, na ọ dị mma maka nchekwa na ala nke iji.
Mụta ihe banyere Free-ere Ọkụ Studio >>
Nke a bụ ike ọkụ software na nwere otutu atụmatụ. Firstly ya nwere ike ire multiple DVD ozugbo na a mara mma dị egwu atụmatụ na o nwere bụ ikike ike ISO faịlụ, nke pụtara na ị pụrụ ịmalite na nkwado ndabere na mpaghara usoro n'agbanyeghị ma na ị nwere oghere DVD ruo aka. Ị nwere ike ịzọpụta ISO faịlụ na nyefee ha mgbe e mesịrị.
Mụta ihe banyere iOrgSoft >>
Mgbe ị na-ahọrọ miniDVDsoft DVD onye software, ị ga-enwe ike DVD nke ọ bụla video faịlụ Ọkpụkpọ. Ị pụrụ ọbụna ike DVD fim nke gị NTSC ma ọ bụ PAL videos mere na ị nwere ike ha maka nchekwa na gifting nzube. Ọ bụ free, ngwa ngwa ma na-enye ọrụ ohere ike DVD menus na ahaziri ndabere na ụda; na-enye ohere mmepụta nke kwuru vidiyo na Dolby audio ntọala.
Mụta ihe banyere MiniDVDSoft >>
9. SoThink DVD Movie Onye kere
SoThink nwere a dị mfe-na-achọ interface. Ị ekwesịghị ileda ya Otú ọ dị, n'ihi na nke a DVD Onye Okike maka Windows 10 bụghị nanị na-enye nhọrọ nke na-ere ọkụ DVD, ma o nwere wuru na-nchịkọta akụkọ nke ga-ekwe ka ị iri ndị ngafe nkeji ebe ị na-fumbling na igwefoto .
Mụta ihe banyere SoThink DVD Movie Onye kere >>
10. WinX DVD chepụtara
Nke a DVD Onye kere bụ nke zuru okè oke nke DVD Onye Okike maka Windows 10 n'ihi na ị, n'agbanyeghị ma ị chọrọ ike ọkachamara DVD maka ire ere ma ọ bụ nnọọ nwere ọbá akwụkwọ nke gị onwe gị na fim maka ojiji nkeonwe.
Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, rụọ ọrụ nke ọma, na-enye gị a nso nke nhọrọ na-enweghị n'ịghagbu gị. Ndị a nhọrọ na-agụnye isi utu aha, ndepụta okwu, na nzukọ site na e kere eke nke ọdịnaya peeji nke.
Mụta ihe banyere WinX DVD chepụtara >>
Ná mmechi, anyị na e nyere gị iri nke kasị mma DVD Onye Okike maka Windows 10 maka eke DVD on a igwe na-agba ọsọ ndị ọhụrụ Windows arụ ọrụ usoro. Ma ị na-achọ ihe ike ọhụrụ mpempe nkà, ihe ịkọrọ ma na-echeta oké echeta nke ezinụlọ ụfọdụ, ma ọ bụ a ndabere dị ka nche n'ihi na gị data, nwere bụ onye ọzọ mpempe ndụmọdụ na anyị nwere na-eso gị: Don 't oge. Onye ọ bụla na-ekwu na-akwado data na-eke DVD bụ ihe ha ga-'Gafee.' Atụla onye mgbe nile na-ezube na-a DVD Onye Okike maka Windows 10 na ndabere ha data na mgbe ahụ na-adịghị gburugburu ya ruo mgbe ọ bụ akaha. Ị nwere ihe dị gị mkpa iji mee ka DVD, otú ga-esi na ya taa!
Top 11 Best DVD Ime Software
Top 10 kasị mma DVD Creator Freeware
Top 10 Best DVD burner maka Windows 10
Top Iri Free 3D Video eso
Top 5 Firefox Video Tinye-ons maka Video Riri Ahụ Aghọọ
Top 50 video Player maka Windows / Mac / iOS / Android
AVS video Ntụgharị reviews na uzo ozo
Top 10 Mass ide ozi n'ekwe ntị Services na Market
5 Ngwaọrụ nkwado ndabere na mpaghara na ekwentị Cloud akpaghị aka
Top 3 Mfe Blackberry ndabere Extractors
Agba Nna Day na Quotes
> Resource> Top List> Top Iri DVD Creator N'ihi Windows 10